Namoota gareedhaan qorattoota ajjeessanii turan 32 irratti murteen darbe – AMBO TV
Naannoo Amaaraa Godina Goojjaam Lixaa, aanaa Gonjii Qolalaatti namoota hojii qorannoo gaggeessuuf gara sanatti imalaniirratti haleellaa garee (daboon) raawwachuun ajjeechaa raawwataniifi miidhaa qaqabsiisan irratti murteen darbe.
Himatamtoota dhimmi isaanii mana murtee olaanaa Naannawa Baahir Daariitti ilaalamaa ture 32 kennisa, himatawwan gareedhaan nama ajjeessuu, qaama hir’isuu, yaalii ajjeechaa raawwachuufi qabeenyaa barbadeessuun jedhaniin dhimmi isaanii ilaalamaa erga tureen booda Jimaata Hagayya 27, 2021 murteen hidhaa irratti murtaa’e jira.
Waggoota sadiin dura ALI Onkolooleessa 13, 2011 aanicha keessatti haleellaa namoota hojii qoranoo digrii sadaffaatiif Yuniivasitii Finfinnee irraa gara sana imalanii fi oggeessa fayyaa buufata fayyaa Aanaa Meencaa irratti gareen haleellaa raawwatanii ajjeesan.
Namoota ajjeeffaman kanneeniin alattis ogeesoota fayyaa biraa sadi irrattis miidhaan qaamaa olaanaan kan qaqabe ture yoo ta’u, nama tokko irratti ammoo yaalii ajjeechaa raawwachuudhaan, konkolaataa tokko ammoo gubuun barbadeessanii turan.
Haleellaan garee sunis qorattootaafi hojjattoota fayyaa kanneen irratti kan raawwatame, osoo isaan mana barnootaa Addis Aalam sadarkaa tokkooffaa aanichaatti argamu keessatti saamuda fincaaniifi bobbaa qorannoof isaan barbaachisu barattoota hayyamo ta’an irraa fudhataa jiranii ture.
Yeroo sanattis naannichatti oduun sobaa qorattoonni sun ”qoricha hin beekamneen waraanuun ijoollee nu jalaa summeessaa jiru, nu jalaa ajjeessuufi” jedhu maatii ijoollee bira waan gaheef namoonni lakkoofsi isaanii baay’ee ta’e gara mana barnootichaa deemuun, miidhaa jedhame sana qaqabsiisuu aanga’oonni naannichaa himuun isaanii ni yaadatama.
Kana hordofuunis hokkoorri uumamee humnootii nageenyaatiin ol ta’udhaan, namoonni gara mana barnootichaa imalan haleellaa uleefi dhakaadhaan oggeessoota kanneen irratti raawwataniin badinsii lubbuufi qabeenyaa qaqabeera.
Dhimmi namoota 32 yakka kana keessatti hirmaataniiru jedhamuun shakkamanii galmee Obbo Malaakuu Ababa jalatti himatamanis manneen murti olaanaa Magaalaa Baahir Daariifi naannawa isheetti ilaalamaa erga turen booda amma murteen irratti kennameera.
Haaluma kanaanis namoonni haleellaa garee kana keessatti hirmaatan 32 haaluma hirmaannaa isaanitiin hidhaa cimaa waggaa tokkoo hanga wagga 20tiin akka adabamaniif itti murtaa’eera.
Kana malees namoonni shan ammoo hirmaannaan isaan haleellaa garee sana keessaa qaban irratti ragaan waan irratti hin dhiyaanneef dursanii bilisaan gadhiifamu manni murtichaa ibseera.
Baahir Daar irraa
Hagayyaa 29, 2021
Previous PostABo’n ‘Gabaasni Komiishiniin Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa Dhiyeesse Adda Bilisummaa Oromoo Kan Hin Amansiisnee fi Fudhatama Kan Hin Qabneedha’ jedhe
Next PostCows have been airlifted from a Swiss Alpine meadow in a process used by farmers to move the injured ones.